4ta walxood ee ay tahay inaad ku lahaato qayb kasta oo ka mid ah waxyaalaha ku jira | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 20, 2015 Khamiis, Agoosto 20, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah shaqaalaheena internedka oo cilmi baaris iyo qoris noogu sameynaya cilmi baaris bilow ah wuxuu weydiiyay hadii aan wax fikrad ah ka qabo sida loo ballaariyo cilmi baaristaas si loo hubiyo in waxyaabaha ku jira ay ahaayeen kuwo si fiican loo soo koobay oo qasab ah. Bishii ugu dambaysay, waxaan ku samaynay cilmi baaris Amy Woodall anshaxa martida ee ka caawinaya su'aashan.
Amy waa tababare khibrad u leh iibka iyo afhayeenka dadweynaha. Waxay si dhow ulashaqeysaa kooxaha iibka iyagoo ka caawinaya inay aqoonsadaan tilmaamayaasha ujeedka iyo dhiirigelinta ee xirfadleyda iibka ay aqoonsan karaan una isticmaali karaan inay u dhaqaajiyaan go'aanka iibsiga horay. Mid ka mid ah khaladaadka aan inta badan ku sameyno waxyaabahayaga ayaa ah inay ka tarjumeyso qoraaga mawduuca halkii ay ula hadli lahayd iibsadaha.
Dhageystayaashaada waxaa dhiirrigeliya 4 cunsur
Karti - Sidee tani uga dhigi doontaa shaqadayda ama noloshayda mid fudud?
qiiro - Sidee tani uga dhigi doontaa shaqadayda ama noloshayda mid faraxsan?
trust - Yuu kugula talinayaa tan, adoo adeegsanaya tan, maxayse muhiim u yihiin ama saameyn u leeyihiin?
Xaqiiqada - Waa maxay cilmi baarista ama natiijooyinka laga helo ilo sumcad leh oo ansaxinaya?
Tani kuma qorna muhiimad, akhristayaashaaduna kuma dhacaan hal cunsur ama mid kale. Dhammaan walxaha waxay muhiim u yihiin qayb miisaaman oo dheellitiran. Waad ku qori kartaa adigoo diiradda saaraya hal ama laba, laakiin dhammaantood waa muhiim. Iyadoo aan loo eegin meheraddaada ama cinwaanka shaqadaada, booqdayaasha waxaa loo saameeyaa si ka duwan sida ku saleysan shakhsiyaddooda.
Sida laga soo xigtay eMarketer, Xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha ugu wax ku oolka badan ee B2B waa dhacdooyin shaqsiyeed (oo lagu xusay 69% suuqleyda), webinars / webcasts (64%), video (60%), iyo blogs (60%). Markaad si qoto dheer u sii qoddobo tirakoobyadaas, waxa ay tahay inaad aragto ayaa ah in xeeladaha kuwa ugu wax ku oolka ahi ay yihiin kuwa dhammaan afarta cunsurba si buuxda looga faa'iideysan karo.
Kulan shaqsiyeed, tusaale ahaan, waad awoodaa inaad ku aqoonsato arrimaha ay dhagaystayaasha ama rajadu diirada saarayaan oo aad u siiso iyaga. Waxay ku dhex milmi karaan noocyada kale ee aad u adeegto. Hay'addeena, tusaale ahaan, rajooyinka qaar waxay arkaan inaan la shaqeynay magacyada waaweyn sida GoDaddy ama Liiska Angie waxayna taasi naga caawinaysaa inaan si qoto dheer ugu dhex galno hawlgelinta. Rajada kale, waxay rabaan daraasad kiis iyo xaqiiqooyin si ay u taageeraan go'aankooda iibsashada. Haddii aan halkaa taaganahay, waxaan ku soo saari karnaa waxyaabaha saxda ah hortooda.
Layaab ma leh in tani ay tahay suuq sii kordhaya. Shirkadaha waxay jecelyihiin macmiilkeena FatStax Bixi codsi moobiil ah oo xogta ku shaqeeya oo ku shaqeeya taleefan casri ah ama kiniin ah oo dhigaya dhammaan waxyaabahaaga suuqgeynta ah, dammaanadda iibka, ama xogta adag ee aad rabto inaad la wadaagto calaacasha gacantaada (khadka tooska ah) si aad u siiso rajadaada waqtiga ay u baahan yihiin waa Maaha in la xuso waxqabadka waxaa lagu duubi karaa iyada oo loo marayo isku dhafka dhinac saddexaad.
Qayb ka mid ah mawduucyada ma guurtada ah, sida soo bandhigida, maqaalka, infographic, warqad cad ama xitaa kiis daraasad, ma lihid raaxo aad ku wada xiriiraan oo aad ku ogaatid dhiirigelinta ka caawineysa beddelka akhristayaashaada. Akhristayaashana kuma dhiirrigeliyaan hal cunsur oo keliya - waxay u baahan yihiin dheelitirnaan macluumaad oo ku saabsan 4-ta cunsur ee ka caawinaya inay ku dhiirrigeliyaan inay ku lug yeeshaan.
Tags: waxyaabaha ku kalifayaContent SuuqdiintaKartixubnodareenkaxaqiiqooyinkafattaxkalsooniQoraalkaqorista maqaallada